ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fokontany fa rehefa anaty fampielezan-kevitra toy izao dia mandalo avokoa ireo kandida ary mampanantena fa hanangana trano vita amin’ny biriky. Efa maro
no nanao tohatra fiakarana io fokontany io tamin’izany ka manahy ireo mponina fa tsy hiakatra 10% an’ireo mpifidy no handatsa-bato ny 27 mey ho avy izao. Marihina moa fa nalaza tsy fidiny
niaraka tamin’ireo fokontany hafa tahaka ny ao Tsimialonjafy Mahamasina ity fokontany ity noho ny loza izay nitranga tamin’ny fianjeran’ny vato tamin’iny faritra iny. Araka ny vaovao azo tamin’ireo
toerana lasibatra, mbola miandry ny fampanantenan’ny fitondram-panjakana ireo mponina. Tsiahivina mantsy fa ireo amin’ny faritra mena tandindonin-doza efa nampanantenaina tany fanorenana nefa maty momoka hatramin’izao. Maro ireo efa nihazo moramora ny trano fonenany ary misy ireo traboina no mbola miandry ny rariny eny amin’ny “Village voara” Andohatapenaka. Efa lasa nikisaka nahazo ny faritra Tsimbazaza izay nahitana ilay vato mandondona voalazan’ny BNGRC indray izao ny sain’ny mpanara-baovao.